OTN / DWDM Amanani Amanani Amaningi Amamojuli Wokusetshenziswa Amaningi | I-China OTN / DWDM Multi-rate Multifunction Module Factory & Abahlinzeki
I-SFP + Multi-Rate Quad Transponder inezikhala eziyi-8 SFP +, Idivayisi ihlinzeka ngokudluliswa okuguqukayo kwezivumelwano ezahlukahlukene, njenge-1G / 10G Ethernet, i-SDH STM16 / STM64, i-OTU1 / OTU1e / OTU2 / OTU2e, iFiber Channel 1/2/4/8 / 10, CPRI, njll. I-SFP + transponder isekela ukusebenza kwamazinga amaningi ngamazinga wedatha ye-optical kusuka ku-1Gbps kuya ku-10Gbps; Ububanzi obuningi bezixazululo zengqalasizinda ebonakalayo buhlanganisa ukuguqulwa kwemidiya, ukuphindwa kwesiginali, ukuguqulwa kwe-lambda.
I-SFP28 Multi-Rate Quad Transponder inezikhala eziyi-8 SFP28, Idivayisi ihlinzeka ngokudluliswa okuguqukayo kwezivumelwano ezahlukahlukene, njenge-100M / 1G / 10G / 25G Ethernet, i-SDH STM1 / STM4 / STM16 / STM64, i-Fiber Channel 1/2/4/8 / 10/16 / 32Gbps, i-CPRI, njll.
Ngokusetshenziswa kwezinhlelo zamabanga amade kuya ngokuya ngokwanda, ukufinyelela kwesigaba esiphakathi kwenkampani yethu (i-MSA) i-EDFA, ukufinyelela kwesigaba esiphakathi (i-MSA) i-EDFA kungaxazulula ngempumelelo ukulahleka kokufakwa okubangelwe yiDCM ne-OADM, kususa iDCM futhi Amaqembu e-OADM. Ukulahleka kokufakwa okuvelayo kunciphisa ukonakala okwengeziwe kohlelo lwe-OSNR.
I-EDFA Optical Amplifier mi-odule inikezela ngemisebenzi eminingi, umsindo ophansi, izixazululo ze-Erbium-Doped Fiber Amplifier (EDFA), i-module ye-amplifier ingaqhutshwa ngokuzuza njalo (i-Automatic Gain Control AGC), amandla okukhipha njalo (i-Automatic Power Control, i-APC). I-VOA edidiyelwe ingalungiswa ngokuzenzakalela ukuze izuze ukubushelelezi kwenzuzo ebushelelezi. Ingakhulisa isignali ye-C-Band nge noma w / o ukufinyelela esigabeni esiphakathi (i-MSA), okuletha ukuguquguquka okuhle kohlelo lokusebenza lwenethiwekhi.
Transmitter Wangaphandle Transmitter, Intengo ye-Huawei Olt, IHuawei Qsfp +, Optical Fibre Module, I-Xfp Transceiver, I-Sfp C ++,